နားရွက်မှာ မွေးရာပါအပေါက်လေးတွေ ပါလာတဲ့သူတွေရှိလား ? – Myanmar Magazine
နားရွက်မှာ မွေးရာပါအပေါက်လေးတွေ ပါလာတဲ့သူတွေရှိလား ?
December 29, 2018 myanmarmagazine	ဗဟုသုတ
လူတော်တော်များများ နားရွက်မှာပါတဲ့အပေါက်လေးတွေ သတိမထားမိကြပါဘူး။ နားဖောက်ထားတဲ့နေရာမှာမဟုတ်ပဲ နားရဲ့အနောက်ဘက်တို့မှာဆို ကိုယ်တိုင် ဒီအပေါက်ကိုမြင်ရဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ အခြားသူကလာပြောမှသာ ကိုယ့်နားရွက်မှာ အပေါက်လေးရှိနေမှန်းသိရတာမျိုးပေါ့။
ဒါကို ဆေးပညာအရ preauricular cysts လို့ခေါ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ချင်းစီပေါ်မူတည်ပြီးအပေါက်အကြီး ၊ အသေးကတော့ ကွာပါတယ်။ တစ်ချို့ က ဘာလို့ပေါက်နေတာလဲဆိုပြီး စိတ်ပူတတ်ကြသလို နားဖောက်ထားတာလားလို့ အများကပြောနေပြီဆိုရင်တော့ ဒါလေးကို ဆက်ဖက်ကြည့်ပါနော်။
နားရွက်မှာ မွေးရာပါအပေါက်လေးပါလာတယ်ဆိုရင် ပုံမှန်အားဖြင့် ကျန်းမာကြံခိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။ တကယ်လို့ ဒီအပေါက်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်း ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်များက အောင်မြင်စွာဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီလို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒါဟာ ကျန်းမာတဲ့လက္ခဏာပဲဆိုတော့ ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီိး ဘာလို့ဖျောက်မှာလဲနော်။
ဒီအပေါက်လေးဟာ အရေပြားအောက်ကနေ ခန္ဓာကိုယ်ထဲလေဝင်ပေါက်ရောက်အောင်လည်း ပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုးမွှားတွေလည်း မဝင်နိုင်သလို ကျန်းမာရေးအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတာမျုိုးမရှိပါဘူး။ တကယ်လို့ အပေါက်က တစ်ခုမကတွေ့နေရင်၊ ယောင်ရမ်းပြီး အနီရောင်သန်းနေတယ်ဆိုဆရာ​ဝန်သွားပြသင့်ပါတယ်။
← မြန်မာလေး သေဆုံးမှု တရားခံအား ထုတ်ပြန်သတင်းစာရှင်းလင်း ခလေးမိဘနှစ်ဦးအား တရားမ၀င် ၀င်ရောက်မှုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့ ခံရ
ရောဂါပေါင်း ၆၁ မျိုးအတွက် ဆေးဘက်ဝင်တဲ့ ဆီးဖြူသီ →
ယောကျာ်းကို ​ကော်​ဖီထဲ အိပ်ဆေးထည့်တိုက်​ပြီး​ အခြားယောက်ျားနဲ့ အတူအိပ်တဲ့ မိန်းမ အခုတော့
December 2, 2018 myanmarmagazine Comments Off on ယောကျာ်းကို ​ကော်​ဖီထဲ အိပ်ဆေးထည့်တိုက်​ပြီး​ အခြားယောက်ျားနဲ့ အတူအိပ်တဲ့ မိန်းမ အခုတော့